Makwishu kuBrazil | Kwayedza
04 Jul, 2014 - 00:07	 2014-07-06T05:42:52+00:00 2014-07-04T00:00:26+00:00 0 Views
ACHANGE ari makwishu svondo rino kuBrazil uko kuri kutambirwa mutambo weFIFA World Cup apo zvikwata zvisere zvasara mumutambo uyu zvichange zvichibandana muquarter-final.
Zvikwata zvasara zvese zvine mukana wekuhwina mukombe uyu saka zvinoziva kuti zvinofanirwa kukwidziridza masokisi azvo kuti zvigohwina.
Mumitambo iriko svondo rino kutanga musi weChishanu uchaona France ichisangana neGermany kunhandare yeMaracana kuRio de Janeiro kozoti mumutambo wechipiri Brazil ichasangana neColombia uyo uchange uchinzi “The Battle of South America”.
Musi weMugovera, zvikwata zviviri zviri kutamba nhabvu inodakadza, Belgium neArgentina, zvichasangana uye zvine vatambi vane mukurumbira asi chimwe chichadzokera kumusha musi uyu mushure mekukundwa.
Mumutambo wechipiri uchatambwa musi weMugovera Costa Rica, iyo yashamisa zvikwata zvakawanda nekusvika kwayaita muquarter-final, ichitamba neNetherlands.
Mitambo miviri iriko svondo rino inogona kufarirwa nevatsigiri venhabvu pasi rese ndeiyi inoti: